Tenisy – “Open Cnaps Sport” : norombahin’i Arivony ny 1 tapitrisa Ar | NewsMada
Tenisy – “Open Cnaps Sport” : norombahin’i Arivony ny 1 tapitrisa Ar
Nahaliana ny rehetra ny famaranana ny “Open Cnaps Sport”, taranja tenisy. Nahitana endri-dalao nahafinaritra ary tena ambony ny lentan’ny fifaninanana. Niady ny famaranana, izay lasan’Andrianafetra Arivony.
Nikatona tamin’ny fomba ofisialy, omaly alahady teny amin’ny Centre complexe sportif Vontovorona, ny andiany voalohany amin’ny “Open Cnaps Sport”, taranja tenisy. Norombahin’i Arivony, ny fandresena tamin’izany ary nahazoany ny lelavola 1 tapitrisa Ar, loka tamin’izany fifaninanana izany.
Resiny teo amin’ny famaranana, tamin’ny seta 2 no ho 1, Ratsimandresy Andritoavina, teo amin’ny sokajy lehilahy. Niady ny fihaonan’izy mirahalahy ary tena nampitsanga-mitoetra ireo mpijery tonga maro. Efa nitarika tamin’ny seta 1 no ho 0 i Arivony no nosahalain’i Andritoavina, saingy nanantombo teo amin’ny traikefa ananany i Arivony, teo amin’ny seta fahatelo, ka nibatany ny fandresena. Na resy aza i Andritoavina, notoloran’ny mpikarakara 800.000 Ar.
Voahosotra ho tompondaka kosa Radilofe Sariaka, teo amin’ny vehivavy, rehefa nandresy an-dRavoniandro Fitia, tamin’ny seta 2 no ho 1 ihany koa. Mpilalao efa diso mifankahalala tsara izy mirahavavy ireto. Tsy nifampitsitsy fa samy naneho ny fahaizany sy ny talentany avy. Tombony ho an’i Sariaka ny tsy fanariana ny baolina.
Nanambara ho afapo Randriantsalama Manan’Iala, talen’ny informatika, sady mpikarakara ny fifaninanana. “Tanjon’ny fifaninanana ny hisian’ny fampivoarana eo amin’ny mpilalao”, hoy izy.
Tsiahivina fa ny 19 avrily lasa teo no nanomboka ny fihaonana ary tokony hifarana ny 30 avrily lasa teo, saingy noho ny fandaminana, omaly vao tontosa izany.
Samy maniry ny hitohizan’ny fifaninanana avokoa ny rehetra. Fihaonana manaraka ny lalao ho an’ny isan-tarika.